Globecast သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာဆိုင်ရာဗဟိုနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပါဝင်သည့်အရာများကိုပေါင်းစပ်ထားသည့်ကြေငြာချက်ကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Globecast ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Hub နှင့်အတူပေါင်းစည်း Cross-platform တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကြောင်းအရာငွေရှာခြင်းအတွက်ကြေငြာလိုက်သည်
Globecast, မီဒီယာများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်ပေးသူ, ယနေ့အားကစားနှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုက၎င်း၏အသစ်ကဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Hub suite ကို၏ပစ်လွှတ်ကြေငြာလိုက်သည်။ Cross-platform တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကြောင်းအရာထုတ်ဝေဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်သိသိသာသာမြင့်မားအပြိုင်အဆိုင်စျေးကွက်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာအတွက်အကြောင်းအရာငွေရှာခြင်းအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေတိုးပွားစေပါသည်။
Liz McParland, Globecast မှာအလှူငွေနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းများအတွက်စီးပွားဖြစ်ဒါရိုက်တာအကြောင်းအရာဖန်တီးသူ, ထုတ်လွှင့်နှင့်လူ့အခွင့်အရေးကိုင်ဆောင်သူအပေါငျးတို့သ၎င်းတို့၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကြောင်းအရာတန်ဖိုးနှင့်၎င်း၏ရွယ်တိုးမြှင့်ဖို့တတ်နိုင်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်နေရာတိုင်းမှာသူတို့အလားအလာကြည့်ရှုရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည် "ဟုပြောသည် Device ရဲ့ကျယ်ပြန့်အနှံ့ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Hub လည်းအားလုံးတစ်ခုတည်းကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသုံးပြီး၏အကျိုးကျေးဇူးနှင့်အတူတစ် modular လမ်းအတွက်ဝင်ရောက်နိုင်န်ဆောင်မှုတစ်ခုဘက်ပေါင်းစုံ suite ကိုမှတဆင့်အကြောင်းအရာထုတ်ဝေပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏ဤအဆင့်ကိုပေးပါသည်။ "
တစ်ခုတည်းဂေဟစနစ်သို့မျိုးစုံ virtualized နဲ့ cloud-based နည်းပညာများ aggregating အသုံးပြုပုံဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Hub Real-time နှစ်ဦးစလုံးတွင်သို့မဟုတ်တစ်ဦးအကြာတွင်နေ့စွဲမှာ Cross-platform အသုံးပွုရနျအတှကျသငျ့လျြောသောအကြောင်းအရာကိုဖန်တီးရန်မျိုးစုံနည်းလမ်းတွေနဲ့ကုသခံရဖို့တိုက်ရိုက် feed ကိုခွင့်ပြုပါတယ်။
အဆိုပါတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ feed ကို linear ပလေးအောက်ကိုအတွက်အသုံးပြုရနိုင်သို့မဟုတ်လူမှုရေးမီဒီယာ, apps များသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအပါအဝင်လူ့အခွင့်အရေးကိုင်ဆောင်သူရဲ့ရွေးချယ်မှုပလက်ဖောင်း, အသက်ရှင်ရန်စီးဆင်းရန်။ edited အတူတူတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ feed ကိုတိုသို့မဟုတ်ရှည်လျားပုံစံအကြောင်းအရာကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်အလိုအလြောကျကျန်သေးသည်နိုင်ပြီး အသုံးပြု. metadata ကိုပူးတွဲခြင်းနှင့် shared ။ ဥပမာအားဖြင့်, မီးမောင်းထိုးပြကလစ်များကြည့်ရှုသူထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသို့မဟုတ် OTT ပလက်ဖောင်းဖန်တီး packages များတိုးမြှင့်ဖို့လူမှုရေးမီဒီယာအပေါ်လျင်မြန်စွာ shared နိုင်ပါသည်။
လူအားလုံးတို့သည် Clip အကြောင်းအရာ - ရေတိုနှင့်တာရှည်-form ကို - အသံလွှင့်အရည်အသွေးကိုမှာအပါအဝင် - - ထို့နောက်မျိုးစုံကို formats / ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားအတွက် Globecast ရဲ့အသစ် Marketplace ပလက်ဖောင်းကနေတဆင့်ရရှိနိုင်ဖန်ဆင်းထားသည်နှင့်ဖောက်သည် '' အမှတ်တံဆိပ်လမ်းညွှန်ချက်များကို အသုံးပြု. branded ။ ဒီပလက်ဖောင်းလုပ်ရတဲ့-အခမဲ့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာ, ထိုအကြောင်းအရာရောင်းအပါအဝင်မည်သည့်သက်ဆိုင်ရာပါတီများအကြားအကြောင်းအရာလဲလှယ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ သမိုင်းအားကစားဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးချုပ်ဥပမာဖြစ်ခြင်း - ဤကိုလည်းရေရှည်များအတွက်လက်ရှိအကြောင်းအရာမော်ကွန်းနှင့်တတိယပါတီများမှထိုအကြောင်းအရာကိုအလွယ်တကူမရရှိနိုင်ပါအောင်ပါဝင်သည်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်န်ဆောင်မှုကိုအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြီးကြပ်မှု tool ကိုသုံးပြီးလုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လုံးစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Hub ပြီးသားသူတို့ကိုအသုံးပြုသောခံတော်မူပြီးမှဤဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူအခွင့်အရေးများကိုင်ဆောင်သူအတော်များများနှင့် တွဲဖက်. တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မျိုးစုံကို formats / ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက် linear တီဗီ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ streaming များ, Pop-up လိုင်းများ, VOD packages များများအတွက်အထူးများ၏ Real-time ဖန်ဆင်းခြင်း - McParland ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ဤသူအပေါင်းတို့ပလက်ဖောင်းကျွေးမွေးဖို့ကိုအပ်ခံရဖို့ရှိပါတယ်ပစ္စည်းပမာဏအတွက်တိုးတက်မှုနှုန်းကို "ဟုပြောသည် လူမှုရေးမီဒီယာနှင့် Clip content တွေကိုဖလှယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းဖို့စွမ်းရည် - အလွန်သိသာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Hub အစစ်အမှန်ကမ္ဘာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကြောင်းအရာငွေရှာခြင်းအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေပေးန်ဆောင်မှုများကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုဖန်တီးရန် virtualized နဲ့ cloud-based နည်းပညာများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်၏အားသာချက်ကြာပါတယ်။ "
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ အထောက်အပံ့ cross-ပလက်ဖောင်း မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှု OTT လူမှုမီဒီယာ လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2018-09-05
ယခင်: ဆွစ်ဇာလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် RSL များအတွက် UHD / HDR ထုတ်လုပ်မှုအတွက် NEP ဆွစ်ဇာလန်ရှေ့ဆောင်များ
နောက်တစ်ခု: Zenterio OS ကိုတို့က Powered Deutsche Telekom မိတ်ဆက် Feature ကို-Rich 4K IPTV, OTT နှင့်ဂြိုဟ်တု STB